Iibso lambarka taleefanka si loo xaqiijiyo sms
Hesho farriimaha SMS-ka si aad iskaga diiwaangeliso goob kasta
Nala soo xiriir Soo gal
Lambarada taleefan ee ku meel gaarka ah si loo helo SMS
Hesho farriimaha SMS-ka si aad iskaga diiwaangeliso bogag kasta oo u baahan xaqiijin
Lambarka taleefanka Virtual ee sms
U iibso lambarka sms Gali emayl dhaba, samee koonto
soona hel lambarka hawlgelinta ee SMS.
Waxaad dooneysaa inaad diiwaangeliso koonto laakiin goobta waxay u baahan tahay
Adeeggeenu wuxuu ku siin doonaa lambarka taleefanka si aad uga gudubto xaqiijinta SMS . Waxaad u isticmaali kartaa si aad ugu hesho SMS leh lambarka xaqiijinta.
Qoraalka oo wata lambarka xaqiijinta waxaa loo diri doonaa lambarka aad dooratay waxaana lagu soo bandhigi doonaa koontadaada gaarka ah ee bartayada.
Hadda waad iska ilaalin kartaa inaad u isticmaasho lambarkaaga shakhsi si aad u sameysato koonto ama aad uga diiwaangeliso degellada.
Lambarro kiro ah ayaa kaa caawin doona inaad ka xaqiijiso goob ama adeeg kasta. Ka hel fariimaha SMS-ka khadka tooska ah 1 daqiiqo oo keliya.
Wadamo kala duwan
80+ dal ayaa laga heli karaa adeegyadeena si aan uga helno nambarro dalxiis oo kala ah: Jarmalka, Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, Indooniisiya, Jabbaan, Faransiiska iyo kuwo kale. Mustaqbalka, dalal badan oo qalaad ayaa lagu dari doonaa kirada dalwaddii tirooyinka.
Lambarka taleefanka muddo 20 daqiiqo ah
Waxaad kaliya bixineysaa farriimaha qoraalka soo galaya. Inta lagu jiro xilligan tiro aan xadidnayn oo fariimo SMS ah ayaa loo diri karaa lambarka la xushay.
Lambarada waxaa loo isticmaali karaa in lagu kiciyo dhamaan adeegyada ku taxan goobta. Xulo kan aad u baahan tahay oo hel SMS xaqiijin lambarkaaga internetka ah. Ka dib nuqul lambarka SMS-ka oo ku dhaji khadka ku habboon markaad isdiiwaangelineyso koontadaada.
API loogu talagalay horumariyeyaasha
Isku xidho barnaamijyadaada, u hel nambarro fariimaha SMS-ka ah. Soo qaado kumanaan SMS daqiiqad ah oo diiwaangeli akoonnada ilbiriqsiyo gudahood! U adeegso SDK-gaaga is-dhexgalka deg-degga ah ee fudud ee loo yaqaan 'API-ga' badan.
U isticmaal nambarradeena si aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah - ha bixinin taada.
Ha u ogolaan shirkadaha inay dib u iibiyaan macluumaadkaaga gaarka ah.
Qarsoodi xoog leh dhammaan fadhiyada khadka tooska ah.
Cryptocurrency waa la aqbalay.
U isticmaal lambar ku meelgaar ah diiwaangelin kasta
SMSVERIFY waxay ku habboon tahay in la diiwaangaliyo:
Isticmaaluhu wuu xaqiijin karaa dhammaan shabakadaha bulshada sida
iyo shabakadaha kale ee bulshada.
Duurjoogta, Tmall, Rakuten
Xisaabaadka ku jira farriimaha
Facebook, Snapchat, Skype, Line, Tencent, QQ iyo kuwa kale.
Email & Xisaabaad
Waxaan kuu soo bandhigeynaa inaan xaqiijino (Gmail, codka Google, xisaabta Microsoft, Yahoo mail) Helno fariimo SMS ah oo loogu talagalay bogag iyo adeeg kasta
Sidee bay tani u shaqaysaa?
Waxaan la shaqeyneynaa shirkadaha xambaara mobilada si aan kuu helno lambar taleefan mobiil oo shaqeynaya oo Mareykanku leeyahay. Adeeggayaga waxaad ku codsan kartaa helitaanka lambar taleefan oo waxaad u adeegsan kartaa lambarka si aad ugu hesho farriimaha SMS-ka. Farriimaha.
waxaa si toos ah looguugu soo dirayaa koontadaada iyadoo loo marayo boggayaga.
Nambaradaadu ma lambarada mobaylka dhabta ah?
Haa, kuwani waa lambarada mobilada dhabta ah. Maaha kuwo la taaban karo oo waxaa loo isticmaali karaa in lagu xaqiijiyo waxkastoo adeeg ah, madal ama goob adeegsaneysa qoraal ama xaqiijin wicitaan. Waxaan la shaqeynaa bixiyeyaasha taleefanka gacanta si aad u codsatid helitaanka nambarada taleefannada dhabta ah ee lagu helo farriimaha SMS-ka ah. Farriimaha waxaa si toos ah looguugu soo diri doonaa koontadaada iyadoo loo marayo boggeena.
Qiimaha SMS la helay wuxuu ka bilaabanayaa $ 0.01. Waxaad heli kartaa lambar bilaash ah.
Immisa Lambar ayaad Leedahay? (Ma yihiin kuwo gaar ah? Dadka kale ee isticmaala ma helayaan tiro la mid ah tan aan isticmaalo?)
Lambarka adiga kaliya ayaa laguu qoondeeyay. Kama iibinayno isla tiradaas laba jeer.
Sideen ku isticmaali karaa lambar taleefan dalwaddeed si aan ugu helo farriimaha SMS-ka ee internetka?
Si aad uga hesho SMS lambarka teleefoonka macmalka ah ee adeeggayaga waxaad u baahan doontaa:
Ka xula waddan liistada laga heli karo goobta.
Xulo wadaha mobilada (haddii ay adiga wax kuu khusayso).
Xulo goobta ama adeegga aad rabto inaad ka shaqeyso koonto.
Kadib nuqul nambarka oo u isticmaal si aad uga hesho fariimaha SMS-ga goobta aad dooratay.
Daqiiqado gudahood, waxaad heli doontaa qoraal ama lambar SMS ah oo ku yaal bogga u dhigma ee adeeggayaga SMS.
Hadda waad ogtahay sida loo helo farriimaha SMS-ka ah taleefan la'aan adoo isticmaalaya lambarrada taleefanka ee ku meel gaarka ah ee kirada.
smsVERIFY.PRO Waxaa lagu sameeyay gudaha Ruushka
Xuquuqda daabacaadda S 2020 SmsVerify. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan.
Fadlan naga caawi sidii aan u hagaajin lahayn adeegga. Fadlan ku soo wargeli wixii khalad ah ee laga helo tarjumaadda E-mailkayaga: smsverify.pro@gmail.com